काठमाडौँ, २३ मङ्सिर (सामाजिक सञ्चार) : नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने व्यवस्थालाई प्रस्तावनामा नै समेटेको छ । मूल कानुनमा नै समाजवादलाई लिपिबद्ध गरिएकाले पनि राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई आफ्नो मूलमन्त्र बनाएका छन् ।
समाजवाद खासमा एक आर्थिक–सामाजिक दर्शन हो । समाजवादी व्यवस्थामा धन–सम्पत्तिको स्वामित्व र वितरण समाजको नियन्त्रणमा रहन्छ । समाजिक, आर्थिक र वैचारिक रुपबाट हेर्दा पनि समाजवादले निजी सम्पत्तिमा आधारित अधिकारको विपक्षमा मत राख्दछ । माक्र्सवादी विश्व दृष्टिकोणबाट हेर्दा वैज्ञानिक समाजवादको जन्मदाताका रूपमा कार्लमाक्र्सलाई लिइन्छ । उहाँले अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र र राजनीतिक सिद्धान्तलाई समाजवादको अवधारणाको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको थियो ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको परिकल्पना गरेर नेपालको संविधानमा समाजवादोन्मुख प्रावधान राखिएको हो । नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिजको लेख ‘द इकानोमी वी नीड’मा अमेरिकको अभ्यास गरिरहेको अर्थव्यवस्था असफलता उन्मुख रहेको भन्दै प्रगतिशिल पूँजीवाद वा समाजवादी अर्थव्यवस्थाको पक्षमा वकालत गर्नुभएको छ ।
समाजवादका बारेमा सर्वत्र चर्चा भइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतको पुस्तक ‘नेपाली कांग्रेस र नेशन विल्डिङ’ आजै सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार काठमाडौँमा यो पुस्तक विमोचन गर्नुभयो । मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले अगाडि सार्नुभएको प्रजातान्त्रिक समाजवादका विशेषता के थिए र उहाँले कुन सन्दर्भमा उक्त विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भन्नेमा पुुस्तकमा व्याख्या गरिएको छ ।
कांग्रेसभित्र बौद्धिक तथा स्पष्ट रुपमा आफ्नो विचार राख्नसक्ने नेताको परिचय बनाउनुभएका डा महतले आफ्नो स्नातकोत्तरको शोधलाई परिस्कृत गरेर पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गर्नुभएको छ । जुन अहिले पनि सान्दर्भिक रहेको छ । बिपी कोइरालाले विसं २०१७ मा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा नेपाल कस्तो थियो ? यहाँको आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षाको अवस्था कस्तो थियो ? यो पुस्तकले आर्थिक पाटोबाट यी प्रश्नहरुको उत्तर दिन खोजेको छ ।
उहाँले नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको विचार अगाडि सार्दा नेपालको कूल साक्षर जनसङ्ख्या सायद त्यस्तै चारदेखि पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा थियो होला । भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारको त त्यस समय झन् कुरै भएन । सडक, यातायातका साधन, बिजुली आदि उपलब्ध नै थिएनन् । यहाँसम्मकी नेपालीको औषत आयु पनि लगभग ३५ देखि ४० वर्षको हाराहारीमा हुँदो हो । हजारौँहजार बिघा जमिन एकाध पूँजीपतिको हातमा थियो । चरम गरिबी, अभाव, रोग, भोक र शोकमा रहेको देशलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले नै उहाँले उक्त विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
एकाध पूँजीपतिको हातमा रहेको जमिनलाई खोसेर भूमिहीनलाई वितरण गर्ने विषयलाई नै बिपीले आफ्नो प्रमुुख प्राथमिकतामा राख्नुभएको थियो । त्यसबाट असमानताको अन्त्य हुन्छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो । युरोप, अमेरिका, अफ्रिकालगायतका देशले गरेको विकास र आर्थिक प्रगतिबाट प्रेरित भएर बिपीले उक्त अवधारणा अगाडि सार्नुभएको हो । युरोपको औद्योगिक क्रान्ति, रसियाको समाजवादी क्रान्तिले पनि बिपीलाई नेपाली मौलिकतामा केही न केही नयाँ अवधारणा अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने बल प्रदान गरेको थियो ।
यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्दा राख्नुभएको तर्क पनि अर्को महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा देखिन्छ । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमार्फत नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो । कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले नेपाललाई सहयोग गर्दा त्यहाँ स्वार्थ जोडिन सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ साझा संस्था भएकाले पनि त्यसमार्फत सहयोग लिँदा कुनै पनि स्वार्थ हुँदैन र रहँदैन भन्ने बिपीको भनाइ थियो । उहाँका यी आर्थिक, सामाजिक पारदर्शिताका पाटोहरुमा पनि यो पुस्तकसँग कुनै न कुनै रुपमा जोडिएर आएका छन् ।
डा महतले आफ्नो पुस्तकको सन्दर्भ जोड्दै भन्नुहुन्छ, “नेपालको विकासका लागि बिपी कोइरालाले अगाडि सार्नुभएको विचार आज पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ भन्ने तथ्य बुझाउनका लागि पनि पुस्तक महत्वपूर्ण छ ।” ‘बिपी कोइराला स्कुल अफ पब्लिक पोलिसी’ले प्रकाशन गरेको पुस्तकलाई १२ खण्डमा विभक्त गरिएको छ । भारत, चीन, अमेरिका, सोभियत सङ्घ, इजरायल र बेलायतसँगको नेपालको आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार र वाणिज्य सन्धिका बारेमा पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ ।
हरेक नेपालीको खरले छाएको भए पनि एउटा घर होस् र एउटा दुहुनो गाई होस् भन्ने बिपीको सदीक्षा थियो । त्यसमा पनि समानता झल्किन्छ । कांग्रेस महाधिवेशनमा जुटिरहेको र सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेको वर्तमानमा बिपीले प्रस्तुत गर्नुभएको समाजवादको खास मक्सद के थियो भन्ने बुझ्न डा महतको पुस्तक उपयोगी छ । कूल १६३ पृष्ठको यस पुस्तकमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रा डा विश्वम्भर प्याकुरेलले लेख्नुभएको भूमिकाले पनि यो पुस्तकको महत्वलाई थप दर्शाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर २३, २०७८, १५:४१:००